झापामा स्थानीय तहको भन्दा कम... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
झापामा स्थानीय तहको भन्दा कम मत खस्ने!
विनोद सापकोटा झापा मंसिर २१
झापामा साँझ ४ बजेसम्म ६२ प्रतिशत मत खसेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकृत प्रेम न्यौपानेका अनुसार जिल्लाका पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ६० प्रतिशत मत खसेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो समय अवधिमा झापामा ६९ प्रतिशत मत खसेको थियो। तुलनात्मक हिसावले स्थानीय तहको भन्दा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मत संख्या कम खसेको देखिएको छ।
झापामा सबै भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा ६६ प्रतिशत मत खसेको छ। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र न ३ मा सबैभन्दा कम ५३ प्रतिशत मत खसेको छ। यसैगरी क्षेत्र न. १ मा ६२ प्रतिशत, क्षेत्र नं २ मा ६२ र क्षेत्र न ५ यो समाचार तयार पार्दा सम्म ५९ प्रतिशत मात्र मत खसेको सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतले बताएका छन् ।
झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा शारीरिक अपांगता भएकी २२ इन्च उचाईकी २५ वर्षीय दिपा कुमारी अधिकारीले स्थानीय त्रिभुवन मा.वि को मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छिन्। त्यस्तै झिलझिले मा. वि.को मतदान केन्द्रबाट १०६ वर्षीय मिङमा शेर्पाले मतदान गरेकी छिन्।
निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार मतदानमा क्रियापुत्री, सुत्केरी गम्भीर प्रकृतिका अशक्तले पनि सहभागी जनाएका छन् ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदाताको उत्साहजनक सहभागितामा मतदान भइरहेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार ५ बजेपछि व्यालेट बक्स सदरमुकाम ल्याइने तयारी भएको भइरहेको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत न्यौपानेका अनुसार मतदान स्थलमा व्यालटबक्स ढुवानीका लागि यातायातका साधन त्यसतर्फ लैजान थालिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २१, २०७४, ०४:२४:५८